"Programming" Executive mabasa: mhedzisiro yekukodha pakuronga nekudzivirira muzera rechikoro | Kudzidziswa Kwekuziva
Kukosha kwe mabasa makuru munzvimbo zhinji dzehupenyu zvinozivikanwa uye, hazvishamise, isu takataura nezvazvo nezvakawanda zvinyorwa; isu takaona, semuenzaniso, kukosha kwemabasa epamusoro maererano ne masvomhu, to mutauro, to kuverenga uye kunzwisisa kwechinyorwa, uye kune iyo creativeness.
Pamusoro pezvo, kuongororwa kwakazara kwemabasa makuru kunogona kubatsira kusarura pakati pemhando dzakasiyana dzekuora mwoyo.
Mhedzisiro iri pachena ndeyekuti kutsvagurudza kwakawanda kwakanangidzira mukana wekusimudzira mabasa emhando dzakasiyana dzemamiriro, semuenzaniso, mu kuenda kukireshi zera, muneaphasia uye mukati akawana kukuvara kwehuropi.
Mumwe munhu akaedzawo kuona kana masimba ekuita achigona kuwedzerwa zvisina kunangana, semuenzaniso nekudzidza a kuridza chiridzwa.
Chidzidzo chakaitiswa naArfé nevabatsiri chinonakidza zvakare, kuburikidza iyo vanyori vakaongorora iyomhedzisiro yekomputa yekudzidzira kudzidziswa pane makuru mabasa.
Zvikurukuru, vakaisa boka revana vane makore mashanu- neatanhatu-makore ekumaawa masere ekudzidziswa pa kukodha kuburikidza nepuratifomu yepamhepo (kodhi.org); vana vamwe chete, nguva yekudzidzira isati yatanga uye yapera yakaenzaniswa nerimwe boka revana, rinoitwa zviitiko zvechikoro zvakajairika mune zvesainzi zvakafungidzirwa zera iri, kuburikidza neanotevera kuronga uye kuyedza bvunzo.
Elithorn Kunzwisisa Maze Kwayedza yeiyo BVN 12-18
Nhamba yeStroop ye BIA
Zvinoenderana nezvakatarisirwa nevatsvagiri, vana vaive vatora chikamu pakudzidzisa zvemakomputa vakawana zvakateerana kuita kunowedzera mukuronga uye kushushikana kwekudzora bvunzo.
Mhedzisiro iyi, yakawanikwa mumwedzi mumwe chete, yaive inofananidzwa nekuwedzera kwepamoyo mukuita kunoonekwa kwemwedzi minomwe izere.
Kufunga nezvazvo, zvese izvi hazvishamise: kudzidza kwe kukodha, zvazviri, zvinoda kuti unyatsoongorora matambudziko, kufungidzira algorithmic maitiro uye nekukamura basa mumatanho akati wandei pasina kumhanyiswa; neimwe nzira, kugona uku kunogona kungopfupikiswa nemazwi ekuti "kuronga" uye "kudzivisa".
Kana idzi data dzakadzokororwa uye mhedzisiro yacho ikaonekwawo muhupenyu hwezuva nezuva hwevana nevechidiki (semuenzaniso, mukuita chikoro) paizove nechimwe chikonzero chekutenda izvo kukodha chiitiko chakakosha kuti chibatanidzwe zvachose muzvidzidzo zvechikoro.
Arfé, B., Vardanega, T., Montuori, C., & Lavanga, M. (2019). Kukodha mumakiredhi epamusoro kunowedzera masimba evana ekushanda. Frontiers mune zvepfungwa, 10, 2713.
kukodha, coding uye Executive mabasa, mabasa makuru, chirongwa uye makuru mabasa, purogiramu yemakombiyuta
"Programming" Executive mabasa: mhedzisiro yekukodha pakuronga nekudzivirira muzera rechikoro2021-08-172021-08-17http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/programmare-le-funzioni-esecutive.-leffetto-del-coding-sulla-pianificazione-e-linibizione-in-eta-scolare.png200px200px
Vane zvipo vana: kusiyanisa masimba ekuita uye njereExecutive mabasa, njere